MUQDISHO, Soomaaliya - Gudigii Aqalka Sare uu u magacaabay dhawaan xalinta Khilaafka Siyasaadeed ee u dhaxeeya Gudoonka Gollaha Shacabka iyo Xildhibaanada ayaa shaaciyay inay burburtay Waanwaantii ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay.
Xubnaha Xalinta Khilaafka ee Aqalka Sare oo uu hogaaminayo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Gudoomiyaha Gudiga ayaa kulamo la yeeshay dhinacyada iska soo horjeeda, gaar ahaan Cabdiweli Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad, kaasi oo la isku mari-waayay.
Gudiga ayaa go'aanka ku dhawaaqay kadib markii la isku mari waayay Qodobada kala ah mudada Gollaha Shacabka la horkeenayo Mooshinka, ee loo codeynayo iyo qaadista Ciidamada la duldhigay Xarunta Baarlamaanka Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegay in Xildhibaanada Mucaaradka ah ee uu hogaaminayo Cabdiweli Muudey ay ka biyo diideen qodobada kor ku xusan, taasi oo soo dedejisay in Gudiga Aqalka Sare ee xalinta Khilaafka uu gacmaha ka taagto Xiisadda ka taagan Gollaha Shacabka.
Dhanka kale, ku dhawaan 100 Xildhibaan oo la safan Jawaari ayaa ku dhawaaqay saacadihii ugu dambeeyay inuu burburay Mooshinka, kadib markii waqtigii loo qabtey lagu korkeeni waayay Baarlamaanka, taasi oo ahayd 28-ka bishan Maarso.
Lama oga halka uu ku biyo shuban doono Khilaafka Siyaasadeed ee hareeyay Dowladda Madaxweyne Farmaajo taasi oo sii billaabatey 14-kii bishan kadib markii miiska lasoo saarey Mooshin xilka looga qaadayo Jawaari, kaasi oo laga taageerayo Xafiiska Ra'iisuk Wasaare Khayre.
Xildhibaannada tageersan Jawaari oo Baaq u diray Farmaajo [Dhageyso]
Soomaliya 03.04.2018. 01:02
Madaxtooyadda ayaa lagu eedeeyay inay ka aamusan tahay xad-gudubyada ay wado...